Xukuumadda Sucuudiga oo walaac ka muujisay qaraxyada sii kordhaya ee Muqdisho. – Radio Daljir
Xukuumadda Sucuudiga oo walaac ka muujisay qaraxyada sii kordhaya ee Muqdisho.
Diseembar 12, 2016 9:21 g 0
Riyad, Dec 13 2016-Xukuumadda Sucuudiga ayaa walaac ka muujisay qaraxyada kadhacaya magaalada Muqdisho, waxaana golaha wasiirada oo kulmay sheegeen in ay haboon tahay in laga hortago Qaraxyada ay geysanayaan Xarakada Al-Shabaab ee ka dhacaya Magaalada ee Caasimada Soomaaliya.
Sucuudigu wuxu sheegay inay kordheen qaraxyada ka dhacaya dalalka Soomaaliya iyo Turkiga , islamarkaana loo baahan yahay in dalalka Islaamka ay u midoobaan la dagaalanka Waxa loogu yeero Argagixisada oo ay sheegeen in ay fara kulul ku hayaan dalal ay ka mid tahay Soomaaliya.
War qoraal ah oo laga soo saaray kulanka golaha Wasiirada dalka Sacuudiga oo uu warbaahinta u aqriyay Wasiirka Warfaafinta iyo dhaqanka dalka Sacuudiga Adel Al-Turaifi ayaa lagu sheegay in dowladda Sucuudiga ay ka go’an tahay in loo gurmado dadkii ay waxyeelado kasoo gaartay Qaraxyadii ka dhacay Magaalada Muqdisho bilihii lasoo dhaafay.
Adel Al-Turaifi Wasiirka Warfaafinta Sacuudiga ayaa sidoo kale xusay in golaha Wasiirada dalka Sucuudiga ay isku afgarteen in dowladda Soomaaliya laga caawiyo la dagaalanka Xarakada Al-Shabaab.
DHEGEYSO-Puntland oo xalay soo gabagabaysay doorashada aqalka hoose.